10ka Taleefan ee Ugu Qaalisan Adduunka 2022 | Iibsashada Ugu Fiican
Bogga ugu weyn 10ka Taleefan ee Adduunka ugu qaalisan sanadka 2022
Taleefannada ayaa qayb muhiim ah ka ah nolol-maalmeedkayaga. Sida ay dadka ugu dhex jiraan fasallo bulsheed oo kala duwan, sicirrada taleefannadu sidoo kale way kala duwan yihiin. Iyadoo qaarkood yihiin telefoonada ugu qaalisan kuwa kalana ay ugu jaban yihiin.
Isbeddello kala duwan ayaa lagu sameeyay qaybo gaar ah oo ka dhigay kan ugu sarreeya taleefannada ugu qaalisan adduunka.
Hoos waxaa ku yaal fiirin dhammaystiran oo ah taleefannada ugu qaalisan adduunka sannadka 2022.
Telefoonkii Ugu Qaalisanaa Abid
Yaa Leh Taleefoonka Ugu Qaalisan Adduunka?
Kaas oo ah talefanka ugu qaalisan aduunka 2022
Taleefanka Ugu Qaalisan Waa Imisa?
Maxay iPhones aad qaali u yihiin?
1. Nidaamka hawlgalka ee u gaarka ah.
2. Barnaamijyada Beta
3. Beerta tufaaxa
4. Dammaanad sare
5. Waswaaska Apple
10 -ka Taleefan ee Ugu Qaalisan Adduunka
2. IPHONE 4S GOLD ELITE (USD 9.4 M)
3. STUART WUXUU XANUUNAYA IPHONE 4 DIAMOND ROSE (USD 8 M)
5. iPhone 3G BOUTS BUTTON (USD 2.5 M)
6. DIAMOND CRYPTO SMARTPHONE (USD 1.3 MILYAN)
7. GOLDVISH LE MILLION (USD 1 milyan)
8. GRESSO LUXOR LAS VEGAS JACKPOT (USD 1 M)
9. KACDOONKII DAHABKA (USD 488,150)
10. SAXIIXA VERTU COBRA (USD 310,000)
Telefoonka gacanta ee ugu qaalisan ee lagu diiwaangeliyo buugga Guinness record waa Goldvish Le Million.
Waxaa sameeyay 2006, Swiss Goldfish SA, taleefanka gacantu wuxuu ka samaysan yahay dahab saafi ah waxaana lagu dhejiyay dheeman. Aad buu qaali u yahay kan, oo wuxuu ku soo koobay wax -soo -saarkiisa saddex gogo 'oo kaliya.
Hal gabal oo ka mid ah taleefankan raaxada leh ayaa lagu iibiyay 1.2 milyan oo doolar. Qaybaha ayaa u soo baxay hal qof oo ganacsade Ruush ah, mid kalena Hong Kong, halka inta kale aan la iibin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dhawaanahan taleefanno qaali ah oo la bilaabay laakiin aan weli lagu qiimeyn buugga diiwaanka Guinness.
FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 PINK DIAMOND oo lagu iibiyay 48.5 milyan oo doolar ayaa ah taleefanka ugu qaalisan ee aan wali lagu qorin buugga diiwaanka Guinness.
Akhri: 10 Xalqada Ugu Qaalisan Ka Qaybgalka Dunida
FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 PINK DIAMOND waxaa iska leh Nita Ambani oo ah xaaska Mukesh Ambani oo ah ganacsade ahna ninka ugu taajirsan qaaradda Asia.
Taleefanka ugu qaalisan aduunka 2022 waa Falcon supernova iPhone 6 Pink Diamond.
XIDHIIDHKA: 15 Kayd Oo Saliid Ugu Fiican Oo La Iibsan Karo 2022 | Hagaha Maalgashiga
Sida uu qoray Tuke.co.ke, talefanka ugu qaalisan adduunka waxa uu ku kacayaa lacag dhan $48.5 milyan, waxaanu la socdaa qalab dhegaha ah oo dhan $300.
Taleefanka Ugu Qaalisan?
FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 PINK DIAMOND ayaa weli ah taleefanka ugu qaalisan adduunka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira laba nooc oo ka raqiisan SUPERNOVA oo ku beddelaya dheemanka casaanka ah dheemanka oranjiga ama buluugga ah, oo ku iibinaya 42.5 milyan oo doolar iyo 32.5 milyan USD siday u kala horreeyaan.
Maxay iPhones qaali u yihiin? Tani waa su'aal laga yaabo inay maskaxdaada ku soo dhacdo mar kasta oo aad damacsan tahay inaad iibsato taleefan cusub.
Indhaha ku yaal iPhone -ka qurxoon ee la soo bandhigay, waxaad wax ka weydiinaysaa qiimaha kaliya si aad u hesho qalbi jaban oo qiimuhu aad ugu sarreeyo jeebabkaaga. Waxaan marqaati u noqon karaa, aniga iyo adiga, waxaan soo marnay isku khibrad.
Halkaan waxaa ah natiijada cilmibaarista sababta aan qalbiyadeenna u jabinno qiimaha iPhone.
Sidoo kale akhri: 10 Keega Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Tartanka ugu weyn ee iPhone waa taleefannada android oo si aad ah uga jaban iPhones oo ku dhowaad si siman u shaqeynaya. Hase yeeshe, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya iPhones iyo taleefannada Android waa nidaamka hawlgalka.
Taleefannada android -ku waxay adeegsadaan nidaamka Operating -ga ee Google iyagoo bixinaya lacag ruqsad. Si kastaba ha ahaatee, Apple waa inay hormarisaa nidaamkeeda hawlgalka ee xoqan.
Marka laga reebo inay tahay mid gaar ah, Apple waxay dawarsataa nidaamka hawlgalka si ay ula kulanto dadka isticmaala iPhone faahfaahinta. Injineerka ugu fiican ayaa ka muuqda sumadda qiimaha alaabta.
Tani waa sifo ka mid ah taleefannada ugu qaalisan.
Barnaamijyada Beta ayaa laga yaabaa inaysan ahayn erayga saxda ah ee lagu sheego sida inta badan soosaarayaasha app -ka ay barnaamijyadooda ugu bilaabaan iPhones hab ka hor Android. Tan waxaa laga yaabaa inay tahay sababta kaliya ee isticmaaleyaasha iPhone ay u bixinayaan barnaamijyada ama maahan.
Tusaale ahaan, horumariyayaashu waxay ku bilaabeen Instagram iyo Snapchat iPhones waxayna shaqeynayeen ku dhawaad ​​2 sano kahor soo bandhigidooda taleefannada android.
Marka xigta, Apple wuxuu shaandheeyaa nooca barnaamijyada lagu rakibayo aaladooda. Habkan, barnaamijyada aan horumarsanayn ama waxyeellada leh uma badna inay ka helaan taleefankaaga.
Apple waxay leedahay hab deegaan oo si wanaagsan loo habeeyay kaas oo u oggolaanaya in si habsami leh u dhex maro aaladaha kala duwan.
Aniga oo ah qof si weyn ugu tiirsan aaladaha teknolojiyadda, waxaan doorbidi lahaa inaan aado aaladaha si fiican isku waafaqa oo aan ka heli karo xogtayda iyo macluumaadka aalad kasta oo aan iska diiwaangeliyey.
XIDHIIDHKA: How Much Does Microsoft Dynamics Cost?
Beerta Apple waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha inuu u kala beddelo iPhone, MacBook, iyo iPad si aan kala go 'lahayn.
Tus waa sabab kale oo taleefoonnada tufaaxu u noqdaan taleefannada ugu qaalisan ee abid la iibiyo.
Inta badan taleefannada android waxay la yimaadaan dammaanad 12+1 bilood ah ciladaha soo -saareyaasha. Si kastaba ha noqotee, alaabada Apple waxay la yimaadaan dammaanad dheeri ah oo ah 2 sano isla.
Akhri: 10 -ka Dharka Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
5. Caqli tufaax
Waxaa jira dareen aan la sharxi karin oo qofku ka helo isticmaalka alaabta Apple. Waxaa laga yaabaa inay tahay xiisaha dhallinta yar ee lahaanshaha astaanta jeebka ku jira ama ku qanacsanaanta maamulaha guud ee og inuu ku shaqeyn doono iyada oo aan la ixtiraamin alaabada Apple.
Tani waxay garaacdaa baahida loo qabo in la iibsado taleefan jaban laakiin qanacsanaan yar. Isticmaalayaasha iPhone waxay had iyo jeer isticmaali doonaan iPhones in kasta oo qiimuhu yahay.
Halkan waxaa ah liiska 10ka taleefan ee ugu qaalisan adduunka;
1. FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 DIAMOND Pink (USD 48.5 M)
Taleefanku waa moodal la habeeyay oo iPhone 6 ah, oo ka samaysan dahab 24-carat ah, dahaadh platinum ah, ilaalin jabsi oo gadaashiisa ku leh dheeman weyn oo casaan ah.
Tani waa taleefoonnada ugu qaalisan adduunka.
Naqshadeynta Stuart Hughes, taleefanku waa mid gacanta lagu sameeyay, oo lagu lunsaday 500 dheeman oo ka badan 100-carats, waxay ku xardheen astaanta iPhone 53 dheeman, laba badhan oo guriga ah, la kala saari karo, 8.6 iyo 7.4-carat dheeman.
Qaybta dambe waxay ka samaysan tahay dahab 24-carat ah. Laabta platinum, gabal lafta dinosaurka asalka ah, iyo dhagaxyo kale oo qaali ah ayaa ah astaamo dheeraad ah aaladdan.
Kani waa taleefanno kale oo ugu qaalisan adduunka.
3. STUART HUGHS IPHONE 4 DIAMOND ROSE (USD 8 M)
Naqshadeynta Stuart Hughes, taleefanku wuxuu ka samaysan yahay dahab roose saafi ah waxaana lagu qurxiyey 500 dheeman oo isku dar ah 100-carats. Telefoonku wuxuu la imanayaa 7kh granite xabadka.
Taleefanku wuxuu ku faanaa 271 garaam oo jirka 22-carat ah, dhagaxa hore ee 136 dheeman, sumadda dambe ee 53 dheeman, badhanka guriga ee dheemanka 7.1- carat, iyo xabbad granite ah oo ka samaysan hal block.
Naqshadeedu waa Stuart Hughes. Waa mid ka mid ah taleefannada ugu qaalisan adduunka.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga ee Tesco 2022 -ka
Peter Allison ayaa ah naqshadeeyaha farshaxankan. Waxay leedahay isku-darka cad, jaale, iyo dahab ubax ah oo gaaraya 18-carats. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay xarig 138 dheeman ah iyo badhanka guriga dheemanka oo ah 6.6 carat.
Naqshadeynta Peter Allison, taleefanku wuxuu ka kooban yahay platinum adag iyo astaanta dahabka Rose.
Astaamaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah; furayaasha dahabka ee Rose rose, oo leh 28 dheeman oo googo’an, 10 dheeman oo buluug ah oo dhif ah, iyo alwaax dhinac ah oo ka samaysan gacmo -gacmeed Macassar ebony.
Waa taleefanno kale oo dunida ugu qaalisan/qaali ah.
Sidoo kale akhri: 10 -Ka Lacag -Dhegaha Ee Dunida Ugu Qaalisan
Waxaa lagu qiimeeyay buugga diiwaanka Guinness-ka, taleefanku wuxuu ku faanaa 18-carat oo ah jir dahab cad ah iyo dahaadhka dahabka, iyo 120 carats oo ah dheemanka darajada VVS-1.
Naqshadeynta Gresso, wuxuu ka sameeyay qeybta dambe ee taleefanka geedo african oo la safeeyey oo laga soo saaray geed jira 200 sano. Tilmaamaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah in ka badan 10 garaam oo dahab ah, dheeman madow, iyo furihii ay qurxisay safayr qaali ah.
Kani waa taleefoonnada gacanta ee kale ee ugu qaalisan/ugu qaalisan adduunka.
Waxaa sameeyay Shirkadda Swiss Goldvish, taleefanku wuxuu leeyahay saacad analog ah oo la kala bixi karo, darafyo wareegsan oo ka samaysan muraayad safayr ah, dheeman, dahab casaan iyo caddaan ah, iyo maqaar qurxoon.
Naqshadeynta Boucheron, taleefanku wuxuu cayaaraa nabarka cobra oo ku wareegsan geesaha waa dahab, wuxuuna leeyahay dhagxaan naadir ah oo dheeri ah. Waxay ka sameeyeen cobra 2 emerald iyo 439 rubi.
Waa telefoonnadii ugu dambeeyay ee ugu qaalisanaa liiskan.
Taleefannada gacanta ayaa weli ah udub -dhexaadka nolol -maalmeedkeena. Si kastaba ha ahaatee, sicirrada ayaa laga yaabaa inay keenaan farqi aad u weyn oo ku saabsan nooca taleefanka uu qofku ku dego.
In kasta oo ay taasi jirto, qiimayaasha kala duwan ee taleefannada gacanta ayaa qiil u noqon kara. Qiyaasaha waaweyn ee raaxada ayaa weli la soo bandhigaa maalin kasta.
Soo-saareyaashu waxay ku dadaalayaan inay ku sii jiraan meesha ugu sarreysa iyagoo isku daraya teknoolojiyadda wanaagsan si loo joogteeyo tartanka ugu sarreeya.
Akhri liiskan si aad u ogaato taleefannada ugu qaalisan/ugu qaalisan abid.
10 Baaskiiladaha Ugu Qaalisan Aduunka
10 Baabuurta Lexus ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Khamrigii Ugu Qaalisanaa Adduunka 2022
Habka tijaabada iyo qaladka ee la socda helitaanka barnaamijyada buugaagta ugu fiican ee iPhones waxay noqon kartaa mid aad u…
10ka Kamarada Amniga Baabuurka ee ugu Fiican 2022
Dalkasta waxa ka dhacay dhawr kiis oo baabuur la xaday, ha noqoto mid horumartay ama ha horumartay. Ma awoodid…
10ka Guri ee ugu Qaalisan Maraykanka 2022
Dalka Maraykanka waxaa la og yahay in uu leeyahay muuqaal hanti maguurto ah oo qurxoon oo qurux badan. Dalka…
Sida loo iibsado ECOMI: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Haddii aad ku jirto cryptocurrency ama aad dhawaan soo gashay, markaa maqaalku hubaal waa adiga.…
Daqiiqad 20 akhri
20 Goobaha Tigidhada Riwaayadaha Ugu Fiican Sanadka 2022
Weligaa ma rabtay inaad u daawato bandhig toos ah si aad u aragto mid ka mid ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay bandhiga,…
10-ka Khamriga ugu Qaalisan Adduunka | 2022
Marka aynu maqalno khamriga adduunka ugu qaalisan, waxa aan u malaynayaa sakhraannimo. Waxaan u maleyneynaa…